Muxuu ka yiri Ansu Fati in Lionel Messi uu kaga garab ciyaaro kooxda Barcelona?? – Gool FM
(Barcelona) 21 Okt 2020. Xiddiga Barcelona Ansu Fati ayaa sheegay inuu weli wax ka baranayo halyeeyga Lionel Messi, wuxuuna hadalka Ansu Fati imaanayaa kaddib markii uu Messi xalay ka gaaray rikoodh cajiib ah tartanka Champions League.
Kooxda Barcelona ayaa guul muhiim ah kaga daah furatay tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkan 2020/21, kaddib markii ay kaga adkaatay naadiga Ferencvaros 5-1, waxaana goolasha u kala dhaliyay, xiddigaheeda kala ah Lionel Messi, Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri iyo Ousmane Dembele.
Lionel Messi ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikhda tartanka Champions League ee gool dhaliya 16 kulan oo isku xigta, kaddib goolkii ​​rigoorada ahaa uu xalay ka dhaliyay kooxda reer Hungary ee Ferencvaros.
Dhinaca kale Ansu Fati ayaa kulankii xalay ka sameeyay bandhig cajiib ah wuxuu dhaliyay wuxuuna caawiyay gool kale, si uu u xaqiijiyo inuu noqon doono xiddiga ay ku tiirsanaan doonto Blaugrana mustaqbalka.
Ansu Fati ayaa ciyaarta kaddib la hadlay warbaahinta, wuxuuna yiri:
“Messi waligiis wuxuu ahaan doonaa Messi, wuxuu u dhalin karaa kulan kasta si walba”.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku heysano Barcelona, ​​maadaama aan wali wax ka baranayo”.
“Waxaan ku bilaabanay guul wanaagsan, waana inaan kusii soconaa sidaan oo kale, goolkeygii kulankaas wuxuu ahaa mid aan ugu mahad celinayo asxaabteyda kooxda”.
“Waxay ii fududeeyeen howsha, runtiis baas qurux badan ayaan ka helay Frenkie de Jong, waxayna kaliya aheyn inaan kubadda dhex dhigo shabaqa”.